पर्यटन / Visit 2020 Nepal – Sagarmatha Online News Portal
काठमाडौं । नजिकिएको चाडबाडलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आन्तरिक उडान सुरु गर्ने तयारी थालेको छ । यद्यपी पहिलो चरणमा आन्तरिक उडान भने काठमाडौंबाट हिमाली र पहाडी भेगका विमानस्थलमा मात्र हुने भएको छ । सो प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीसँग छलफल थालिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । चाडबाड आएका छन्, उडान त खोल्नु परिहाल्छ, मंगलबार मन्त्रालयम...
संखुवासभा । सङ्खुवासभाका ४ हिमताल जोखिममा छन् । सङ्खुवासभाका १०४ हिमतालमध्ये लोवर वरुण हिमतालसहित चारवटा हिमताल जोखिममा रहेको अन्र्तराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले जनाएको छ । इसिमोडका डा. अरुणबहादुर श्रेष्ठका अनुसार मकालु बेसक्याम्पभन्दा तल रहेको लोवर बरुण हिमताल र भोटखोला गाउँपालिकास्थित हिमताल उच्च जोखिममा रहेको छ । सङ्खुवासभाका चार र तिब्बतका १७ वटा हिमताल फुट्ने जोखिम...
सोलुखुम्बु । जिल्लाको सोताङ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्यटकीय क्षेत्र धर्मपिक जाने पदमार्ग निर्माणको काम सकिएको छ । प्रदेश नं. १ उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटबाट सोताङ गाउँपालिकाकै ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा रहेको धर्मपिक पर्यटन पदमार्गको काम सम्पन्न भएको हो । समुन्द्र सतहबाट धर्मपिकको उचाई ३ हजार ४ सय ६० मिटर रहेको छ । धर्मपिक पर्यटकीय स्थल भएकाले पदमार्...
काठमाडौं । हिमालयन म्याजिक ट्रेक्सले पर्यटन क्षेत्रका पर्यटन गाईडहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । विश्व व्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प भएको बेला हिमालयन म्याजिक ट्रेक्सले आफ्ना ११ जना पर्यटन गाईडहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेको हो । ट्रेक्सका प्रबन्ध निर्देशक नविन कार्कीले पर्यटन गाईडहरुलाई चेक हस्तान्तरण गर्दैै आर्थिक सहयोग गरेका हुन् । ‘तपाई प...
काठमाडौं । नेपाली आकाशमा अहिले चिनियाँ विमान फाट्टफुट्ट उडेको देख्न सकिन्छ । तर, ती व्यावसायिक वा चार्टर्ड उडान भने होइन । अन्य कुनै उद्देश्य नभई सगरमाथाको उचाइ लिनका लागि चिनियाँ विमान आकाशमा उडेका नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिए । चीनले आफ्नो क्षेत्रबाट सगरमाथाको उचाइ नाप्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सर्वेक्षण सुरु गरेको हो । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापि...
महाकुलुङमा १७ किलोमिटर पर्यटन पदमार्ग निर्माण
मनबहादुर कुलुङ/सोलुखुम्बु । जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिकामा १७ किलोमिटर पर्यटन पदमार्ग निर्माणको काम सकिएको छ । गाउँपालिकाको वडा नं. ३ दुरेकोम (१९८०मि.)देखि पाँचपोखरी दोबाटो (४,३२२मि.)सम्मको पर्यटन पदमार्गको निर्माण काम सकिएको हो । पर्यटन विकास आयोजना विराटनगरको ५० लाख आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको पर्यटन पदमार्ग गाउँपालिकाकै नमूना विकासको योजना बनेको गाउँपालिका अध्यक्ष सागर किरातीले बताए । ...